ဘီစီအီး ၃ ရာစုမှ ဂရိ သင်္ချာပညာရှင် ယူကလစ် (ကွန်ပါထောက်တံ ကိုင်ထားသူ) ကို ပန်းချီဆရာ ရာဖယ် (Raphael) က ၎င်း၏ အေသင်သားတို့ ကျောင်းတော် (The School of Athens) အမည်ရ နံရံဆေးရေး ပန်းချီကားကြီးတွင် စိတ်ကူးပုံဖော်ချက်[မှတ်စု 1]
သင်္ချာဟူသည် အဘယ်နည်းဟူသော မေးခွန်းအတွက် အားလုံးသဘောတူ လက်ခံသည့် ကျစ်လစ်တိကျသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိသည့်အပြင်[မှတ်စု 2] လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေသည့် သင်္ချာပညာရှင် အများစုသည် ဤမေးခွန်းကိုဖြေရန် စိတ်ဝင်စားလေ့မရှိပါ။[မှတ်စု 3] သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်အချို့၏ သင်္ချာအပေါ် ရှုမြင်ပြောဆိုချက်များကို ကြားနာခြင်းဖြင့် သင်္ချာ၏ သဘောသဘာဝကို တစေ့တစောင်း သိနိုင်သည်။ စွယ်စုံရပညာရှင် ဂယ်လီလီယို (၁၅၆၄-၁၆၄၂) က "သဘာဝတရားကို ကျမ်းတစ်စောင်ဟု တင်စားလျှင် ၎င်းကျမ်းကို သင်္ချာဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသည်" ဟုလည်းကောင်း၊ သင်္ချာပညာရှင် ကားလ် ဖရီးဒရစ် ဂေါက် (၁၇၇၇-၁၈၅၅) က "သင်္ချာသည် သိပ္ပံပညာရပ်များ၏ ဘုရင်မ" ဟုလည်းကောင်း၊ သင်္ချာပညာရှင် ဘင်ဂျမင် ပီရာ့ (၁၈၀၉-၁၈၈၀) က သင်္ချာကို "မလွှဲမသွေဖြစ်ရမည့် ဧကန်မုချ အကျိုးရလဒ်များကို ကောက်ချက်ဆွဲသည့် သိပ္ပံဘာသာရပ်"[မှတ်စု 4] ဟုလည်းကောင်း၊ ဆိုခဲ့သည်။
သင်္ချာကို အရေအတွက် ဂဏန်း၊ ပမာဏနှင့် ပုံသဏ္ဌာန် စသည်တို့၏ ယေဘုယျသဘောကို စတင်သိရှိခြင်းမှ စတင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ [မှတ်စု 5] 
ယူကလစ်၏ ပုံမှာ မည်သည့်မီဒီယာတွင်မှ မကျန်ရစ်ပါ။ ယူကလစ်ပုံ သရုပ်ဖော်ချက် အားလုံးသည် ပုံဖော်သူ အနုပညာရှင်၏ စိတ်ကူးဉာဏ် ကွန့်မြူးချက်သာ ဖြစ်သည်။
အကျယ်ကို သင်္ချာဆိုင်ရာအတွေးအခေါ် (philosophy of mathematics) တွင်ကြည့်ပါ။
သင်္ချာသမားအများစုက "သင်္ချာဟူသည် သင်္ချာသမားများ လုပ်သည့် အလုပ်ဖြစ်သည်" ဟု အလွယ်တကူ ဖြေလေ့ရှိသည်။
ဤအဆိုမှာ မူရင်းအင်္ဂလိပ်အဆိုဖြစ်သည့် "the science that draws necessary conclusions" ကို ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပီရာ့က ၎င်းအဆိုပါ "necessary" ဟူသော နာမဝိသေသနကို ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း ဤအဆိုကို အချောသတ် မရေးသားခင် အကြမ်းရေးသားခဲ့သည့် ပီရာ့၏ စာများအရ သင်္ချာယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်သည့် "necessary" ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ သင်္ချာတွင် ပေးချက်များ (premises) မှ စတင်၍ နိဂုံးကောက်ချက်များ (conclusions) ရောက်သည်အထိ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ယုတ္တိကျကျ တွေးခေါ်ရေးသားရလေ့ရှိသည်။ ဥပမာ ပေးချက်အဆို (အဆို က ဟု ဆိုပါစို့) ကြောင့်၊ အဆို ခ မှန်ရမည်။ အဆို ခ မှန်သောကြောင့် အဆို ဂ ငယ် မှန်ရမည်ဟု သက်သေပြသည် ဆိုပါစို့။ ထိုအခါ အဆို ခ သည် အဆို က ၏ မလွှဲမသွေဖြစ်ရမည့် ဧကန်မုချ အကျိုးရလဒ် (necessary conclusion) တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဆို ဂ သည် အဆိုခ၏ အကျိုးဖြစ်သည်ဟု သင်္ချာယုတ္တိဗေဒတွင် ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။
အကြမ်းဆိုရလျှင် သစ်သီး နှစ်လုံးဟူသော ပမာဏမှ နှစ် ဆိုသည့် အရေအတွက် သဘောနှင့် နွားနှစ်ကောင် ဆိုသော ပမာဏမှ နှစ် ဆိုသည့်သဘောသည် ဒြပ်ထည်များဖြစ်သည့် သစ်သီးဖြစ်ခြင်းနှင့် နွားဖြစ်ခြင်းဆိုသည့် ရုပ်လောက ဆက်စပ်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ နှစ်ဆိုသည့် ဒြပ်မဲ့ စိတ္တဇနာမ် သဘောတရားသက်သက် ရှိကြောင်း၊ ဥပမာ၊ သစ်သီးနှစ်လုံးရှိရာ သစ်သီးနှစ်လုံး ထပ်မံပေါင်းထည့်လျှင် သစ်သီး လေးလုံးဖြစ်လာသည် ဆိုသည့် သဘောမှာ သစ်သီးဖြစ်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ နှစ် ဖြစ်ခြင်းဆိုသည့် သဘောနှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ နွားနှစ်ကောင်ရှိရာ နောက်ထပ်နွားနှစ်ကောင် ထပ်ပေါင်းလျှင်လည်း သစ်သီး ဥပမာမှာ ကဲ့သို့ပင် နွားလေးကောင် ဖြစ်လာကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ဆိုသည့် ဂဏန်းကို နှစ်ဖြင့် ထပ်ပေါင်းလျှင် လေးရကြောင်း၊ အစရှိသည်ဖြင့် ရုပ်လောကနှင့် ဖယ်ခွာ၍ ပမာဏဆိုသည့် အကြံဉာဏ် သဘောတရားသက်သက်ကို သိရှိလာခြင်းကို ယေဘုယျ နာမ်သဘာဝ ပြုခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် abstraction၊ ဟု ခေါ်သည်။
Gold 2003, section III.B.
Machamer 2014, section 1.
Beiler 1964, p. 1.
Grattan-Guinness & Walsh 2013, section 4.
Peirce 1881, p. 97.
Boyer 1991, p. 1.
ရှေးခေတ် မြန်မာသိပ္ပံကျမ်းများ - ဒေါက်တာ မျိုးသန့်တင်